Sir Baa Wac Tidhi – Rasaasa News
Aug 24, 2009 Jwxo-shiil, Safaarada Itobiya
xagan gabi xagan gabi gunti walac, gab gabade gaaraadaymoodow geesaha dayow safaarad galow geesi noqo giddi waa la joogaa goobta, garabkaa daymoo Jwxo-shiil gur joogtiisa aa geestaada joogta.
Waxaa Maalintii shalay ahayd Magaalada London, ka dhacday Riwaayad aad iyo aad yaab u leh, riwaayadaas oo ahayd mid lacag la,aan ah, riwaaydu waxaa ay ahayd mid aan hadal lahayn waxayna ka dhacday Safaarada Itobiya ee London.
Itobiya waa dal calan leh, waa dal dhaqan ahaan aad uga gadisan Somalida. Itobiya waxaa ay safaarado ku leedahay dalal badan, sida tan Ingriiska, safaaradaha Itobiya waxay matalaan dalka Itobiya, waxaa kale oo ay waxa ay u baahan yihiin u qabtaa dadka Itobiyanka ah ee xidhiidhka la leh, safaarada lana ogg yahay Itobiyaanimadooda. Safaaradu marka ay jiraan marxalado gaar ah waxay war galisaa dadweynaha Itobiyanka ah ee dalkaas jooga si ay uga qayb qaataan.
Hadaba, waxaa jira qoomiyado badan oo ka soo jeeda Itobiya oo degan dalaka Ingriiska, dadyowgaasi ma laha xidhiidh ka dhaxeeya, laakiin xidhiidhkoodu waa Safaarada kaliya. Somalidu way ka dhaqan gadisan tahay isumana aqoonsanaba in ay yihiin dad Itobiyan ah, hadana had iyo goor waxay hor tuban yihiin oo ay ku banaan baxaan Safaarada Itobiya.
Waxaa dhawaan soo gaadhay London wafti ka socotay Kaalinka 5aad, waxaana ay dadka badankiisu u dhaaranayeen masuuliyiinta Kaalinka, waxayna lahaayeen waxaanu waydiin su,aalo iyo waliba in halkaas wax lagu yeelo. Waxaase soo baxay wax ayna filaynin, waxaana dhacday in shalay lagu qabto Safaarada Itobiya shir aad u balaadhan oo ay ka soo qayb galeen dad sida lagu sheegay aan marna ka yarayn 350 ruux.
Safaarada horteeda waxaa banaanbax ku samaynayey dad lagu qiyaasay 80 ruux, dadkaa oo ku tala gashanaa in uu shirku dhici doono 12:00 – 16:00 ayaa waaxay ka soo qaateen booliska saacadahaas. Waxay dadku aad ugu qalyayeen magaca ILEY, waxaana kolkay saacadu ahayd 15:00 Pm soo bilowday dadkii ka qayb galayey shirka safaarada ka dhacayey oo raxan raxan u socda, shirkuna sida la sheegay wuxuu bilaabanayey 16:00 Pm.
Dadkii banaanbaxayey waxaa ka soo hadhay amakaag, waayo waxay aad uga yaabeen dadka safaarda galyey badnidiisa, waxaa kale oo ay aad ula yaabeen iyaga oo ka dhex arkay saaxiibadood oo sii galaya safaarada. Waxaa isa salaamayey dadka safaarada sii galaya iyo kuwa banaanbaxaya, waxaa kolkii dambe bilowday in qaar ka mid ah dadkii banaanbaxayey iyaga oo calamii wata ay damceen in ay ka qayb galaan shirka ka dhacayey safaarada. Waxaana irida ka celiyey waardiyaha irida waayo waxaa laga waayey tigidhkii lagu dhaafayey albaabka, kolkaas ayey is arkeen iyaga oo calankii ururka ONLF uu madaxa u saaran yahay, kolkaas ayey dib u soo boodeen.
Dad badan oo ka mid ahaa banaanbaxyaalka ayaa aad uga xumaaday in ay yimaadaan banaanbaxa, kaas oo ay dadku taagnaayeen qorax muddo dheer iyaga oo arkaya, saaxiibadood oo si wanaagsan loogu soo dhaweynayo safaarada Itobiya, cabitaan iyo cuntana ay diyaar ugu ahaayeen gudaha, barina ay is arki oo ay la soo fadhiisan shirka loo qabanayo ururka ONLF, waayo xad ma leh taageerayaalka ururku.
Waxaase naxdin lahayd kolkii ay gudaha ku arkeen Sahra Macalin, xaaska Jwxo-shiil oo dhex fadhida hoolka shirarka ee safaarada Itobiya, ma jiraan cid ay wada hadleen, marka laga reebo kuwii ay isla socdeen oo dhinacyada ka fadhiyey. Dadka oo aad u badnaa iyo iyaga oo ahaa kaliya dhagaystayaal, ayeyna dadka warkan noo sheegay arg xiligii ay soo baxayeen xaaska Jwxo-shiil.
Xiliyadan dambe ayeyna dadku is rumaysanin wax kasta oo aad u sheegto, hadaad xitaa tusto sawirka waxay ku odhanayaan waxan waa la samayn karaa.